Maxaa U Sabab Ah Biya Baxa Ragga Oo Soo Daaha Sideena Lagu Xalin Karaa ?.
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Friday, 10 Nov 2017 06:26 AM / No Comments
Marka uu ninku samaynayo galmo waxaa khasab ah inuu gaaro heer uu biyaha soo saaro.
Xiliga biya baxa ninka ayaa noqon karta mid soo deg degta taasoo inta badan la arko xiliyada ugu horeeya ee uu qofku ku cusub yahay galmada, xaaladdaan ayaa ah mid dabiiciyan ah oo soo marta inta badan ragga waana mid ku ekaata xili.
Hadii ay sii socoto waxaa lagama maarmaan ah in lagu xaliyo qaab shaqsi ah sida jimicsigal ama daaweyn.
Biya baxa ayaa sidoo kale noqon kara mid soo daaha, Sida caadiga ah biya baxa raggu marka ay galma samaynayaan waa mid u dhaxeeya 4 ilaa 10 daqiiqo, Biyo baxa oo soo daaha waa xaalad caadi ah, hadii aysan la socon, xanuun ama walwal.
Biyo baxa oo soo daaha waxaa sababa qodobo badan, waxa ugu badan ee sababa ayaa la rumaysanyahay inay tahay walwalka ama qanaaco la’aan laga muujiyo galmada, qalliimada qaar sida kuwa lagamaro dhabarka (xungulaha) ama qajirka loo yaqaano brosteyt iyo dawooyinka qaarkood ayaa ah kuwo keeni kara xaaladaan.
Dhaawac soo gaara dareemayaasha miskaha, infekshanada qaar sida midka kudhaca habka kaadi mareenka, hormoonka laga soo daayo qanjirka thyroid oo yar ama hormoonka loo yaqaano testosterone. Sidoo kale walwalka ayaa qayb muhiim ah ka qaata soo daahitaanka biyaha ragga.
Waa Maxay Astaamuhu
Astaanta ugu weyn ee la arki karo ayaa ah biyaha oo soo daahay taasoo ninka ku abuuraysa xaalad walwal ah, waxaa macquul ah in la dareemo xanuun waxaana inta badan uu yimaadaa marka ay jirto wax ku gudban ama gufaynaya kanaalka loo yaqaano Urethra ee kaadi mareenka. Ninka ayaa sidoo kale ay lasoo daristaa baqdin,
Deganaan la muujiyo xiliga galmada iyadoo la iska indhatirayo baqdin ama qanaaca la’aanta ka timaada galmada ayaa ah arrin faa’ido wayn xambaarsan. Walwalka ayaa kamid ah qodobada ugu waaweyn ee keeni kara xaaladdaan, waxaana lagama maarmaan ah in la maareeyo walwalka.
Naxariista ama raaxada galmada oo lunta
Walwal joogta ah oo saamaynaya labada lammaane
Xariirka labada lammaane oo noqda midaan wanaagsanayn marka galmo timaado
Xaaska oo aan uurqaadayn
Mala daaweyn karaa
Haa, waxaa inta badan lagu daweyn karaa hab shaqsi ah. Hadii aysan jirin bogsasho waxaa lagama maarmaan ah in la booqdo dhakhtar. Ciladdaan ayaa ah mid lagu xakamayn karo daweeyn.
Xasilooni la muujiyo xiliga galmada ayaa ah mid faa’ido weyn leh, waxaana muhiim ah inaan wax cabsi ah laga muujin galmada. Hadii aad aragto xaaladdaan oo daba dheeraata waa muhiim inaad booqato dhakhtar,haddii aad ka heshay fadllan u sii share gareey asxaabtaada Facebook ,ceeb ma ah ka hadalka xaqiiqda